EParis-eSingapore: Inqwelomoya yeAir France yabakhweli abagonyelweyo kuphela
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Airlines » EParis-eSingapore: Inqwelomoya yeAir France yabakhweli abagonyelweyo kuphela
Airlines • isikhululo • uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zaseFransi ezaphulayo • Iindaba zeMpilo • iindaba • abantu • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Iindaba zaseSingapore zokuPhula • Tourism • uthutho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel
EParis-eSingapore: Inqwelomoya yeAir France yabakhweli abagonyelweyo kuphela.
Inethiwekhi ebanzi yeAir France-KLM iyakwazi ukudibanisa amazwe amaninzi e-VTL ngokusebenzisa iihabhu zayo ezimbini eParis naseAmsterdam, kunye neemeko zetikiti eziguqukayo.
I-KLM / Air France isebenza ngenqwelomoya kwiivenkile zokuHamba ngeNtsholongwane (VTL) ukusuka eParis naseAmsterdam ukuya eSingapore.
Ukusukela nge-21 ka-Okthobha ka-2021, iAir France isebenza ngeenqwelomoya ezimbini ezonyuliweyo zeNdlela yokuHamba ngeNdlela (VTL) ukusuka eParis ukuya eSingapore.
Abahambi kufuneka bahlangabezane nazo zonke iimfuno zeNdlela yokuHamba yokuTofa (VTL).
Ukusukela nge-21 ka-Okthobha u-2021, iAir France izakubonelela ngeenqwelomoya ezimbini ezikhethiweyo zeVTL ezivela eParis-CDG rhoqo ngoLwesine nangoMgqibelo kude kube ngumhla wamashumi amathathu ananye ku-Okthobha ka-31, kwaye ukusuka nge-2021 Novemba 1, rhoqo ngolwesiHlanu nangeCawa.
Ngehabhu yayo, iPair-Charles de Gaulle Airport, iAir France izakungena kunxibelelwano lwabo kwaye inikezele ngeenqwelomoya ezine ezikhethiweyo zeVTL kunye neeveki ezintandathu ezingamiselwanga zeVTL eSingapore.
URoland Coppens, Umphathi Jikelele we-Air France KLM I-Asia eseMpuma ye-Asia ne-Oceania yagqabaza yathi: "" Siyayiqonda ngokupheleleyo into yokuba abantu bafuna ukuhamba nokunxibelelana kwakhona nosapho kunye nabahlobo, kwaye sonwabile ukuphinda siqhubeke nohambo lwethu kunye nolonwabo Singapho . I-Air France ne-KLM zidale uthungelwano olongezelelekileyo kunye neenqwelomoya ezine ze-VTL eziya eSingapore, kunye neenqwelomoya ezintandathu ezingamiselwanga zeVTL ezivela eParis naseAmsterdam. Ngothungelwano lwethu olubanzi lweAir France KLM, siyakwazi ukudibanisa amazwe amaninzi e-VTL ngokusebenzisa iindawo zethu ezimbini eParis naseAmsterdam, kunye neemeko zetikiti eziguqukayo. ”
Ishedyuli yenqwelomoya yeAir France ukusuka eParis ukuya eSingapore
kwiShedyuli Inombolo yokubhabha Usuku ukumka ukufika inqwelo-moya
ukuya kumhla wama-31 kuOkthobha 2021 AF208 uLwesibini 21: 05 15: 55 + 1 B787
I-AF256 (VTL) NgoLwesine ngoMgqibelo
01 Novemba 2021 ukuya 26 Matshi 2022 AF208 uLwesibini 21: 00 16: 35 + 1
I-AF256 (VTL) uLwesihlanu